Koox hubeysan oo toogtay nin ergada ka tirsanaa | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Koox hubeysan oo toogtay nin ergada ka tirsanaa
Koox hubeysan oo toogtay nin ergada ka tirsanaa
Mid ka mid ah ergadii Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya soo dooratay ayaa xalay lagu dhexdilay hoygiisa, kadib markii ay ku weerareen rag bastoolado ku hubeysnaa.
Ninkan oo la oran jiray Xasan Codey Julaas ayaa lagu dhex dilay hoygiisa oo ku yaala degaanka Far Leysaan, oo qiyaastii 40-KM dhinaca galbeed kaga toosan magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Nin ka tirsan dadka degaanka ayaa sheegay in ninkaasi ay dileen laba nin oo watay mooto/dhugdhugley, kuna hubeysnaa bastoolado.
“Ragga waxay gudaha u galeen hoyga marxuumka, ka dibna way ku dhex dileen, marxuumka laba cisho ka hor ayuu soo booqday reerkiisa oo halkan ku dhaqan, wuxuuna ka soo tagey magaalada Garbahaarey oo uu deganaa.” Ayuu yiri Qof ka tirsan dadka degaanka.
Xasan Codey Julaas ayaa ka mid ahaa Ergadii Xildhibaanada ku soo dooratay Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose, Julaas ayaa si weyn uga dhex muuqday bulshada ku dhaqan magaalada Garbahaarey, isagoo ahaa nin ay dadku aad u garanayeen.